Iikholeji zaseNyakatho zaseDakota: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuqhathaniswa koMgca-ohlangothini lweCandelo loLwamkelo kwiiKholeji zaseMntla Dakota
Abafundi abanethemba lokuya kwikholeji yaseNorth Dakota baya kufumana iinketho ezivela kwiiyunivesithi ezinkulu zikarhulumente ukuya kwiikholeji ezincinane zamaKristu. Iinjongo, ubuntu, kunye nemigangatho yokwamkelwa kwiikholeji zikaRhulumente ziyahluka ngokubanzi. Ukukunceda ukuba ubone ukuba ngaba izikolo zakho ze-SAT zijoliswe kwiikholeji zakho ezizithandayo zaseNyakatho Dakota, itekisi elingezantsi linokukunceda.
Izikolo ze-SAT zeeKholeji zaseMntla Dakota (phakathi kwe-50%)
YeBismarck State College kuvunywa
IDickinson State University 400 580 450 620 - -
KwiYunivesithi yaseMayville State 310 440 383 475 - -
University of Minot 440 530 480 560 - -
KwiNyuvesi yaseNyakatho yeNtshona Dakota 495 630 505 645 - -
Ukuhlala kwiKholeji yaseBull kuvunywa
Ikholeji yeBhayibhile yeZiqu zithathu 340 525 295 530 - -
Yunivesithi yaseJamestown 450 560 440 580 - -
KwiYunivesithi kaMariya 475 590 455 580 - -
University of State City 400 480 410 470 - -
Itheyibhile ibonisa ama-50% aphakathi kwama-SAT amanqaku kubafundi abathathi-matriki. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphaya kweli bakala, unesimo esomeleleyo sokwamkelwa. Ukuba amanqaku akho angaphantsi kwenani elisezantsi, gcinani engqondweni ukuba abafundi abangama-25% ababhalisile babekwe kwindawo efanayo.
Kubalulekile ukubeka i-SAT ngokufanelekileyo. Uvavanyo luyingxenye enye yesicelo, kwaye irekhodi elomeleleyo lezemfundo kunye neeklasi zokulungiselela amacandelo ekolishi lubaluleke ngakumbi kunamanani okuvavanya. Kwakhona, ezinye iikholeji ziya kuqwalasela amanyathelo afanelekileyo afana nesicatshulwa sakho sesicelo , imisebenzi yangaphandle kunye neencomo zengcebiso .
I-Cheers, i-Chants kunye ne-Yells ye-Volleyball Cheerleaders